Dalal laga gargaarayo ebola - BBC Somali
Dalal laga gargaarayo ebola
Madaxweynayaasha Liberia, Sierra Leone iyo Guinea oo ka socda dalalka uu sida ba'an u saameyay xanuunka Ebola ayaa codsaday in la siiiyo gargaar badan oo ka caawiya dagaalka ay kula jiraan cudurka.
Madaxweynaha Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, ayaa kulanka Washington ee baanka adduunka ka sheegay in dunida aysan deg deg ku filan uga jawaabeynin iyadoo caruur ay agoontoobeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaalna ay geeriyoodeen.
Ku xigeenka madaxa heyadda caafimaadka adduunka (WHO), Bruce Aylward, ayaa isla kulankaasi ka sheegay in Ebola ku xoogeystay magaalooyinka waaweyn ee sadaxda dal uu cudurka saameeyay, wuxuuna ku socda xawaare sare.
Dadaalo lagu hakinayo cudurka ayaa socda. Wadanka Nigeria labo boqol oo shaqaalaha caafimaadka ayaa isu diwaangaliyay inay aadan dalalka Afrikada Galbeed uu cudurka ku dhuftay.
Wadanka Liberia doorashooyinka sanateka ayaa dib loo dhigay si uusan cudurka u faafin. Dalka Spain lix ruux ayaa la karantiilay kaddib markii la ogaaday kalkaaliso ay la xiriireen in cudurka laga helay.